Ugu yaraan shan qof oo lagu dilay gudaha masjid kuyaala magaalada Quabec ee Canada kadib markii niman hubaysan ay rasaas ku fureen - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldUgu yaraan shan qof oo lagu dilay gudaha masjid kuyaala magaalada Quabec ee Canada kadib markii niman hubaysan ay rasaas ku fureen
January 30, 2017 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Booliiska ayaa sheegay in ay xireen labo qof. [Sawirka: Reuters]
Toronto-(Puntland Mirror) Ugu yaraan shan qof ayaa lagu dilay dhowr kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii niman qoryo ku hubaysan ay rasaas ku fureen masaajid kuyaala gudaha magaalada Quebec ee dalka Canada xilli lagu jiray salaada cishaha, sida ay sheegeen booliiska.
Qof goobjooge ah ayaa wakaalada wararka Reuters u sheegay in ilaa saddex nin oo qoryo watay ay rasaasta ku fureen dad gaaraya 40 qof oo ku jiray gudaha masaajidka xalay oo Axad ahayd.
“Waxaa jira dad badan oo dhaawac soo gaaray…..waxaa jira dhimasho.” Sidaa waxaa wariyeyaasha u sheegay afhayeen u hadlay ciidamada booliiska Quebec.
Booliiska ayaa sheegay in ay xireen labo qof.
Raysulwasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa boggiisa Twitter-ka ku sheegay in uu aad uga xunyahay weerarkaas lagu qaaday masaajidka Quebec, waxaana uu sheegay in uu dareenka la qaybsanayao qoysaska dhibanayaasha ah.
Masaajidka ayaa horey loola bartilmaameedsaday weerar Islaam-nacayb ah. Bartamihii bishii June ee sanadkii 2016-ka Intii lagu guda jirey Ramadaanta, madax doofaar ayaa la dhigay albaabka laga galo masaajidka.
October 25, 2016 Dagaalyahano ku dilay 60 qof kulliyad booliis oo kutaala Pakistan
Muqdisho-(Puntland Mirror) Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa sheegtay in ay toogasho ku fulisay afar nin oo ay ku eedaysay in ay ahaayeen basaasiin. Sida ay daabacday warbaahinta taageerta Al-Shabaab, nimanka la toogtay ayay maleeshiyadu ku eedaysay in [...]